Sekoly tsy miankina Mitaky ny handoavana ny ekolazy 10 volana
Na dia mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana tanteraka aza isika ary tsy mbola fantatra izay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mikasika ireo
ankizy mpianatra noho ny hamaroan’ireo olona lasibatry ny coronavirus dia tsy miova ny an’ireo sekoly tsy miankina. Mitaky ny handoavan’ny Ray aman-dReny ny saram-pianarana folo volana tsy banga izy ireo saingy mampanantena kosa fa hovitainy ny fandaharam-pianarana na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana. Nivory sy nikaon-doha mikasika ny fahasahiranana sedrainy izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Nambarany tamin’izany fa ankoatra ny karaman’ireo mpampianatra dia manana olana izy ireo amin’ny fandoavana ny hofantrano, indrindra fa ho an’ireo mbola manofa. Manao antso avo amin’ireo Ray aman-dRenin’ny mpianatra araka izany izy ireo mba hifanome tanana aminy. Raha araka ny fanadihadiana natao tamina sekoly maromaro moa dia mbola ireo Ray aman-dRay mampiana-janaka hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ihany hatreto no nandoa saram-pianarana. Ny ankoatra izay dia mbola 0 Ar avokoa.